Iwo 12 Brand Archetypes: Ndeupi Iwe Uri? | Martech Zone
Iwo 12 Brand Archetypes: Ndeupi Iwe Uri?
Tose tinoda anoteerera anotevera. Isu tiri kugara tichitsvaga iyo yemashiripiti kushambadzira chirongwa icho chichatibatanidza isu kune vateereri vedu uye kuita chigadzirwa chedu chikamu chisingadzoreke chehupenyu hwavo. Izvo isu zvatisingazive kazhinji kuti hukama hukama. Kana iwe usina kujeka nezve zvauri, hapana anozove anofarira iwe. Zvakakosha kuti unzwisise kuti ndiani chiratidzo chako, uye nemabatiro aunofanira kuita hukama nevatengi vako.
Kune gumi nemaviri mazita - kana archetypes-Chiratidzo chinogona kufunga. Pazasi, ini ndakatyora zvese gumi nembiri kuti ndikubatsire kunzwisisa kwaunenge uri:
Iye MAGICIAN anoita kuti zviroto zviitike - Iyo Magician archetype ndeye zvese nezve chiratidzo. Mashiripiti emashiripiti haakugadzire bhurosi remazino riri nani kana kukubatsira kuti uchengete imba yako yakachena; vanounza zviroto zvako zvakashata kuhupenyu. Izvo zvavanopa chiitiko chakakura hapana mumwe munhu aigona kuwana. N'anga inowirirana nezvinhu zvakakosha zvepasi rose zvekuti vanogona kugadzira zvisingaiti. Disney ndiye mashiripiti akakwana. Disney ndeyechokwadi kambani yemidhiya, asi ivo havana kufanana nechero ipi. Ivo vanopa chiitiko chinoshanduka. Ivo vari muchikamu chavo pachavo nekuda kwehukuru hwekuona kwavo. Fungidzira chimwe chigadzirwa chinogona kuvaka Mashiripiti Umambo kana Disney World.
Iyo SAGE inogara ichitsvaga chokwadi - Kune ungwaru, njere ndiyo kiyi yekubudirira. Zvese zvimwe zviri zvechipiri pakutsvaga ruzivo. A sage brand inogona kunge isinganzwe kudziya uye cuddly. Ivo havazokutorera iwe mune inonakidza nyika seDisney. Pane kudaro, sage anoraira rukudzo rwako nekuratidzira kupenya kwavo. Harvard University inyanzvi. Iwo ndeimwe emayunivhesiti anoremekedzwa kwazvo pasirese. Kuzvirumbidza pane alumni runyorwa rwunosanganisira mapurezidhendi masere eUS, maNobel 21 maNobel, naMark Zuckerberg (rudzi rwe), zita raHarvard ndere kungova akangwara.
INNOCENT inongoda kufara - Vasina mhaka ndeveparadhiso. Wese munhu akasununguka, akanaka, uye anofara munyika isina mhosva. Chiratidzo chisina mhosva hachizombokupa mhosva iwe nechishambadziro kana kuenda pamusoro kuti chikubvumire. Pane kudaro, mucherechedzo usina mhaka unokukwezva iwe nechimwe chinhu chakanyanya kusimba: Kufunga. Orville Redenbacher ndiyo prototypical isina mhosva archetype. Ivo vanokutengesa iwe kurapwa kwehudiki, popcorn, uye yavo mascot sekuru vasina kumbomira kunakidzwa sezvo bowties yaive chinhu unironically.
Iyo OUTLAW inoda shanduko - Iye Outlaw haatyi. Mhando dzevapanduki dzinodzora hupenyu hwavo vasingatarise chinzvimbo chiripo. Iko archetype isina mhosva inobata chikamu chako icho chaida nguva yekudyiwa mukireshi, ari kunze kwemutemo archetype anokwezva kune chikamu chako chinocheka makosi kuchikoro chesekondari. Kuvaka chinamato chinotevera seApple ndicho chinangwa chekupedzisira chechiratidzo chemutemo. Rangarira avo vekare iPod kushambadzira uko monochrome vanhu vaive nenguva dzakanakisa dzehupenyu hwavo vachitamba? Chiyeuchidzo icho hachi kukuudze kuti umire mukati mevanhu kana kuenda kukonzati. Inokuudza kuti uve iwe, kutamba chero paunoda, uye kuti uzviite neApple Kana iwe uchifunga kuti Apple haina chinamato chinotevera, funga izvi. Vanhu vakamirira mumutsara kwemaawa apo iyo S7 yakaburitswa? Kwete, ndiyo mhinduro.
JESU anorarama munguva - Iyo Jester iri pamusoro pekunakidzwa. Jester mabhureki anogona kunge asiri kurapa zvirwere, asi vari kuita kuti zuva rako rive nani. Kuseka, kupenga, kunyangwe zvisina maturo zvese zviri muhomwe yetekitori. Icho chinangwa chejester brand ndechekuita iwe kunyemwerera neyakareruka-moyo unofara. Iye Old Spice Man imwe yeangu enguva-dzese dzandinofarira kushambadzira uye muenzaniso wakanaka wejester archetype. Vamwe vakomana vanoita zvakanaka kune hyper-masculine branding. Vamwe vakomana havadaro. Nekuita kuseka kubva kune aya akanakisa emurume zvigadzirwa, Old Spice inosvika kukumbira kune ese mativi.
VANODA vanoda kukuita yavo - Kushushikana, kunakidzwa, uye kuita zvebonde ndiwo mazwi eakadiwa. Anoda brand anoda kuti iwe uzvibatanidze pamwe neapo padyo nguva muhupenyu hwako. Chii chaunotenga kupemberera? Chii chaunotenga chako chakakosha chimwe chemazuva ekuzvarwa nemhemberero? Mikana ndeyekuti, iwe uri kutenga kubva kune anoda brand. Funga nezve Godiva Chokoreti kushambadzira. Zvinomboita kuti iwe ufunge nezve hutano hwako, yako mari, kana rako ramangwana? Kwete. Godiva anokufurira iwe. Inoratidza kupfuma kwayo uye kugwinya. Inokukoka iwe kuti utore chikamu mukunyanyisa kukuru kwehupenyu: Chokoreti.
MUDZIDZISI anoda kusununguka - Rusununguko zvese muongorori ane hanya nazvo. Iko kumwe mamwe mabrands angaedze kukubatsira iwe kuvaka imba, ekutsvagisa mabrandi anoda kukubuda iwe kunze. Uine izvi mupfungwa, zvinonzwisisika kuti mazhinji mabrands ekunze akasarudzika akakodzera kune anotsvaga archetype. Subaru ndiyo yakasarudzika Explorer brand. Ivo havatengese mota dzavo zvichienderana neumbozha kana kunyaradzwa; vanosimbisa rusununguko runopihwa neSubaru.Blizzard? Hapana dambudziko. Subaru inoita kuti iwe usarudze kwauri kuenda, zvisinei nemamiriro ezvinhu. Wasununguka.
Mutongi anoda simba rakazara - Kunyanya uye kusarudzika ndizvo zviri mutongi nezvazvo. Mutongi chiratidzo mutariri wegedhi. Kana mutengi akatenga kubva kwavari, vanosvika pakuve vevakuru. Kuonekwa senge yemhando yepamusoro uye inodhura kwakakosha kune mutongi chiratidzo. Zvishongo nezvishongo zvepamusoro-soro zvakasikwa zvinokodzera mutongi archetype. Iwe unotenga Mercedes Benz nekuda kweiyo yekukanganisa bvunzo chiyero? Zvakadiniko nemageji ayo egasi? Zvigaro zvaro zvinopisa? Kwete. Unotenga Mercedes-Benz nekuti unokwanisa, uye vamwe vanhu vazhinji havagone. Pese paunopaka mota yako, vanhu vanonzwisisa chimiro chako iwe usingataure kana neshoko. Iko kunyarara kwakanzwisiswa kukosha ndizvo izvo mutongi brand anotengesa.
Iye CAREGIVER anoda kukurera iwe - Muchengeti ane mutsa. Vanoda kuvapo kwauri uye nevanhu vaunoda. Muchengeti mabhii zvese ndezve kudziya uye kuvimba. Unogona kuvimba navo kana zvasvika kuvana vako. Kashoma kuona mucherechedzi brand achimhanyisa shambadziro inotora pfuti pamakwikwi avo. Izvo zvinopesana nekukonana. Mutsetse wetsiva waJohnson & Johnson ndeye Johnson & Johnson: Kambani Yemhuri. Iwe haugone kuwedzera kuzvipira kumhuri kupfuura izvozvo. Yekushambadzira yaJohnson & Johnson inogara ichitarisa kuti zvigadzirwa zvavo zvinokubatsira sei kutarisira vana vako. Maitiro avo zvigadzirwa anovaka mhuri. Ichi chingwa-uye-bhotela kune muchengeti archetype.
Iro gamba rinoda kuzviratidza - Iyo gamba rinoita kuti nyika ive nani nekuve akanakisa. Gamba chiratidzo hachinei nekukurera iwe; vari kufarira kukupikisa. Kana iwe uchida kukwira kuchiitiko ichi, iwe uchazoda rubatsiro rwegamba. Mauto eUS ndiye muenzaniso wekupedzisira wegamba archetype Funga nezvevashambadzi vekutora vawaona nemauto achisvetuka kubva muherikoputa, vachimhanya kuburikidza nedzidzo dzekudzidzira, uye vachidzivirira nyika. Chero chipi zvacho chinoita sezuva nezuva? Zvirokwazvo kwete. Hazvifanirwe kudaro. Yakagadzirirwa kukumanikidza iwe pindura kufona uye simukai muchiitiko ichi nekujoinha neyemhare gamba: Mauto eUS.
YEMAHARA GUY / GIRL anoda kuve wake - Kwete glitz kana glamour, chingori chigadzirwa chakavimbika chinoita kuti basa riitwe. Ndoizvo zvigadzirwa zvevakomana / vasikana zviri kutengesa. Iyo archetype yakanangana nekupa chimwe chinhu kure kure nekunyepedzera icho chinogona kukwezva kune wese munhu. Iyo yakaoma archetype yekubvisa nekuti iwe unofanirwa kuve nechigadzirwa chinokwezva pane huwandu hwevanhu. Munhu wese anonwa kofi. Haasi munhu wese, asi wese akakosha huwandu hwevanhu pamwe neanogona kunze kwevacheche. Ndo izvo zvinoita kuti Folgers ave mukuru wega mukomana / musikana mhando. Folgers haashambadzi kune vazhinji vehudyu. Ivo havazvirumbidze nezve yavo yepamusoro mhando, yese-organic kofi. Vanozvichengeta zviri nyore: "Chikamu chakanakisa chekumuka ndiFolgers mukapu yako." Munhu wese anomuka. Wese munhu anonwa maFolger.
Musiki anoshuvira kukwana - Musiki haana hanya nemutengo wekugadzira kana kugadzira zvinhu pachiyero. Ivo vane hanya nechinhu chimwe chete: kuvaka chigadzirwa chakakwana. Nepo mashiripiti achisimbisawo kuona nekufungidzira, vagadziri vakasiyana mukuti havavhure mashiripiti epasi uye vanogadzira zvisingaite. Ivo vanogadzira yakakwana chigadzirwa. Lego muenzaniso wakanaka wemusiki archetype. Mune kumwe kushambadzira kwavo, Lego akagadzirisazve mune zvakashamisa zvakadzama zvinozivikanwa zvepasirese. Ivo havana kuvaka nzvimbo nyowani, uye havana kugadzira imwe nyowani tekinoroji inoisa iwo masayiti mumba mako. Lego akashandisa tekinoroji yakapusa inogoneka: mabhuroko. Vakatora izvi zvakapfava ndokuzvisundira kune kwakanyanya kukwana kwakanyanya. Ndozvazviri kuva musiki.
Saka, chii chinonzi archetype chiratidzo chako?
Kubva pamakumi emakore ezviitiko, ndinogona kukuudza kambani yega yega inouya patafura ichifunga kuti ndivo vese mukomana / musikana, asi mune 99% yezviitiko, havasi. Kuchera pasi mune izvo zvinoita kuti zita rako rive rakakosha uye kuti vatengi vako vanobatana zvakadii nezvigadzirwa zvako hazvisi nyore, asi ndicho chinhu chakanyanya kukosha chaungaite kuti unzwisise kuti ndeipi archetype iwe yaunofanirwa kushandisa.
Tags: archetypesmuchisochitupa chizivisomutarisirimusikiDisneyDisney nyikaexplorergambamhosvajesteranodamashiripiti umamboshereketeoutlawdzosemutongiripararire
Deb Gabor ndiye munyori we Kugadzira Bonde: Tora Vatengi Vako Vatakure uye Tengesa Iyo Gahena Kunze Kwechinhu. Iye ndiye muvambi weSol Marketing iyo yakatungamira maratidziro emakambani ekubatanidza kumasangano kubva pamazita epamba epasi rose saDell, Microsoft, uye NBC Universal, kune vanokunda dhijitari saAllrecipes, Cheezburger, HomeAway uye RetailMeNot, uye gumi nemaviri ekutanga-padanho tech uye dhijitari. midhiya titans.
Zvinofanirwa Kuti Zvikwereti Zvitore Matanho Panyaya Dzemagariro?